वृद्धवृद्धाको बेवास्ता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक २१, २०७६ चन्द्रकिशोर
काठमाडौँ — संस्कृत साहित्य वैराग्य शतकम्मा भर्तृहरिले आफ्नो समयलाई चित्रित गर्दै लेखेका छन्, ‘बुढ्यौलीमा यस्तो कष्ट हुन्छ कि सन्तानले पनि शत्रुको जस्तो व्यवहार गर्छन् ।’ अहिले देहातमा वृद्धजनको हालत दयनीय छ । गाउँघरको पञ्चायतीमा नयाँ खिचलो प्रवेश गरेको छ ।
वृद्धभत्ता वा पेन्सन रकममाथि सन्तानको छिनाझपटी, मृतकको नाममा भत्ता बुझ्ने, वृद्ध आमाबाबुको सेवा गर्न आलटाल गर्ने, पालैपालो सेवा गर्ने भागबन्डा लगाउने तर मौका आउँदा पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ ।
आफ्नो नाममा सम्पत्ति नामसारी गराइसकेपछि हेला गर्ने, उपचारमा ध्यान नदिने, गाउंँमा एक्लै छाडेर आफन्तहरू पलायन हुने आदि । भत्ता थाप्ने बेला कतिपय परिवारमा सन्तानले आदरभाव देखाउँछन्, तर रकम सकिन लाग्दा उपेक्षा गर्छन् ।
वृद्धजनमाथि बढ्दो उत्पीडनको घटनाले देखाउँछ कि परिवारमा संवेदनहीनता र अमानवीयता बढ्दै छ । कहावत नै छ, ‘बूढ भेली दूर भेली’ अर्थात् बुढ्यौलीमा परिवारबाट टाढा पारिन्छ । वृद्धजनहरू अवसाद (डिप्रेसन) को सिकार हुँदै छन् । उनीहरू आफूलाई परिवारले टाढा राख्न खोजेको वा बोझको रूपमा लिएको अनुभव सुनाउँछन् । जहाँ अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई छठपर्वको बेला अभिनन्दन गरिन्छ, त्यहाँ डाँडाका जूनघामसरि भएका मातापिता या वृद्धजनलाई अपमान होइन, अभिनन्दन गर्नुपर्छ ।
केही दशकयता यो समस्या बढ्दै छ । मधेस समाज आफ्नो थातथलोबाट कम विस्थापन हुने र संयुक्त परिवारको माहोलमा बस्ने समुदायको रूपमा चिनिन्थ्यो । तर बदलिंँदो आर्थिक जीवनशैलीले सबै थोकमा बदलाव देखिँदै छ । वृद्धजन कुनै समरूप श्रेणी होइन । सहरी र देहाती वृद्धलाई अलग–अलग तरिकाबाट हेरिनुपर्छ । किनभने यिनीहरूका पृष्ठभूमि फरक छन् । कथित उच्च जाति, पिछडा वर्ग, दलित, मुस्लिम यी सबैलाई समदृष्टिले हेर्न मिल्दैन । सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमिले पनि असर पार्छ ।
वृद्धवृद्धाहरू जुन समस्या सामना गर्दै छन्, त्यो हाम्रो विकासको सहउत्पादन हो । समस्या एकापसमा गुजमुजिएको छ । अहिले विकासको जुन मोडल अपनाइएको छ, त्यसको अनिवार्य परिणति ‘जोइन्ट’बाट ‘न्युक्लियर’ परिवारतर्फ जानु हो । फेरिएको पारिवारिक संरचनामा पति, पत्नी र सन्तानका लागि ठाउँ त छ, तर हजुरबा–हजुरआमाका लागि छैन ।
विकासको अहिलेको तौरतरिकाले स्थानीय, पारम्परिक, घरेलु तथा साना उद्योगमा ह्रास ल्याएको छ । आजीविकाका लागि पलायनप्रति आकर्षण बढ्दो छ । अहिलेको विकसित पारिवारिक–सामाजिक संरचनामा वृद्धजन वञ्चितिमा पर्नु स्वाभाविक हो । परिवारको युवा पिढी रोजगारीका लागि पलायन भएपछि घरमा बाँकी रहन्छन् वृद्धजन ।
बाल्यकाल र बुढ्यौली यस्तो अवस्था हो, जसमा भावनात्मक र शारीरिक देखभालको सबभन्दा बढी खाँचो हुन्छ । ‘न्युक्लियर’ परिवारमा बच्चाहरू जसोतसो हुर्किहाल्छन्, तर वृद्धवृद्धाहरूको भरोसा हराउँदै जान्छ । अहिले मधेसका गाउँघरमा वृद्धवृद्धा एक्लै बाँच्न अभिशप्त छन् । अशक्तता, आर्थिक असुरक्षा, भावनात्मक–शारीरिक देखभाल गर्नेहरूको अनुपस्थिति र एक्लोपन जस्ता समस्याले एकैपटक तिनलाई घेरा हालेका छन् । जसका सन्तान सँंगै बसिरहेका छन्, तिनलाई पनि अपेक्षित समय र सेवा आफ्ना सन्तानबाट प्राप्त भइरहेको छैन ।
वृद्धजनको हेरचाहको सवालमा सन्तानहरूबीच कलह हुने, भागबन्डा हुने, पन्छिनका लागि गाउँ छाड्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिँदै छन् । आवश्यक र आत्मीय शुश्रूषाभन्दा पनि अरूलाई देखाउनका लागि मात्र राम्रो व्यवहार हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।
पारिवारिक संवाद कम हुँदै छ । परिवारसँग बिताउनुपर्ने समयमाथि प्रविधिले कब्जा जमाएको छ । पर्वका बेला भेला हुँदा पनि नयाँ पुस्ता आफ्नै लयमा हुन्छ । परिवारका ज्येष्ठ सदस्य भने आँगन भरिएको बेला आत्मीय गफको पर्खाइमा हुन्छन्, तर सामाजिक सञ्जालप्रतिको तीव्र रुझान तथा पुस्तान्तरले त्यो अवसर नै आउन दिँदैन ।
पहिले–पहिले पर्वका बेला हुने पारिवारिक जमघटले भावनात्मक सम्बन्ध बढाउँथ्यो, तर त्यसमा ह्रास आएको छ ।
वृद्ध पुरुषभन्दा वृद्ध महिलाहरूको अवस्था झन् कमजोर छ । यसका लागि पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया र सम्पत्तिमाथि पुरुषहरूको वर्चस्वको परम्परा दोषी छ । कानुनी रूपमा महिलालाई सम्पत्तिमाथि हक प्राप्त भए पनि सामाजिक रूपमा अझै तगाराहरू छन् । के धनी, के गरिब सबैमा वृद्धवृद्धाहरू वञ्चितिमा पर्ने क्रम बढेको छ ।
शिक्षा, रोजगार र उन्नतिका लागि सन्तान आमाबाबुबाट टाढा जान्छन् । स्वयम् अभिभावकले नै पनि बाहिरिन प्रेरित गर्छन्, तर जब आमाबाबुलाई खाँचो हुन्छ, त्यति बेला छोराछोरी साथमा हुँदैनन् ।
मध्यम र निम्न वर्गको परिवारमा कतिपय अवस्थामा वृद्ध पुरुषभन्दा महिलाको उपयोगिता हुन्छ, बच्चाको रेखदेख र घरायसी काममा सहयोग आदिले गर्दा । तुलनात्मक रूपमा जग्गावालभन्दा भूमिहीन खेतीहर मजदुरहरू बुढ्यौलीमा चेपुवामा पर्छन् । खेतीपातीमा भित्रिएको प्रविधिले गरिब र अशिक्षित वृद्धजनलाई असहाय बनाइदिएको हुन्छ । केही एकल वृद्धवृद्धाले त छरछिमेकको अनुकम्पामा बाँच्नुपरेको छ ।
घरका सुविधासम्पन्न कोठा उदीयमान नयाँ निर्णयकर्ता सदस्यले ओगट्छन्, वृद्धवृद्धाहरूको वयजन्य आवश्यकताको पनि उपेक्षा गरिन्छ । मधेसी समाजमा जीवनसाथी गुमाएका महिलाको एकाकीपन ज्यादा बढी छ । एक्लो वृद्ध पुरुष तीर्थयात्रामा जान सक्छन्, आँपको बगैंचामा नयाँ पुस्तासँग तास खेल्न सक्छन्, प्रायः वृद्ध महिलालाई यो अवसर प्राप्त हुँदैन ।
नयाँ आर्थिक–सामाजिक फेरबदलले वृद्धजनलाई किनारामा धकेल्दै छ । मौजुदा आर्थिक जीवनले मान्छेहरूको भविष्य असुरक्षित बनाएको छ । कृषि आधारित जीवन प्रणालीको अभिन्न अंग नै संयुक्त परिवार थियो । जहाँ वृद्धजन आश्वस्त रहन्थे । अहिले अधिकारको भावना प्रबल भएको छ, तर कर्तव्यप्रति रुचि कम छ । समाज फगत छेउछाउमा बसोबास गरेर बनेको हुँदैन । जुन भावनात्मक र मानवीय उष्माले समाज निर्माण भएको छ, त्यसको कमीमा समाजमा सामाजिक मर्यादा लोप हुँदै छ । यसो हुनुमा अहिलेको आर्थिक संरचनाको अहम् भूमिका छ । वृद्धजनको सामाजिक असुरक्षा र आर्थिक अभाव अहिलेको विकास संरचनाको प्रतिफल हो ।
सरकार खुसी दिन सक्दैन । यो काम परिवार र समाजको हो । सरकारले आवश्यक सेवाका लागि प्रयत्न गर्न सक्छ । मधेसमा वृद्धाश्रमको नयाँ परिकल्पना गरिँदै छ । वृद्धहरू यसका लागि मानसिक रूपमा तयार छैनन् । यही कारण हो, मधेसी समाजमा त्यति साह्रो वृद्धाश्रम छैन । त्यसो भए समाधान के त ? विमर्श ढिलो हुँदै छ ।
वृद्धवृद्धा बोझ होइनन् भन्ने सामाजिक मानसको आवश्यकता छ । वृद्धाश्रमले मधेसी समाजको सांस्कृतिक विफलता र संस्कारगत संकटलाई उजागर गर्छ । सामाजिक रूपमा कतै हाम्रो करूणा र सम्मानको भाव हराउँदै गएको त छैन ? यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । असली परिवर्तन तब सम्भव छ, जब हामी स्वयं आफ्ना आमाबाबुलाई पारिवारिक जीवनको अभिन्न हिस्सा मान्छौं र आदरभावपूर्वक देखभाल गर्छौं ।
वृद्धजनलाई हाम्रै पृष्ठभूमि सुहाउँदो परामर्श आवश्यक हुन्छ । यसमा स्थानीय सरकारले अग्र भूमिका खेल्न सक्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:३३
बिन पानी छठ सून
कार्तिक १४, २०७६ चन्द्रकिशोर
छठ आज सुरु हुँदै छ । यो पर्व र पानीबीच अभिन्न नाता छ । चारै दिन पर्वका सामग्रीको स्वच्छता, स्नान, अर्घ्य र अनुष्ठान सबैका लागि पानी चाहिन्छ । कुनै जलाशयको किनारमा पूजा गर्नु यसको अनिवार्य पक्ष हो । पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नै घरआँगनमा पूजा गर्न खोज्नेहरूले पनि कृत्रिम जलाशय बनाएकै हुन्छन् । छठ मात्रै किन ? हाम्रा अन्य पर्व र अनुष्ठानले पनि पानीबिना पूर्णता पाउँदैनन् ।
जन्मदेखि मृत्युसम्मका कुनै पनि सांस्कृतिक कर्म पानीबिना पूर्ण हुँदैनन् । छठकै लोकगीतहरूमा पानीको गरिमा र यसको प्रयोजन अभिव्यञ्जित भएको पाइन्छ । छठमार्फत पानीप्रति आदराञ्जली प्रकट गरिन्छ । नदी र पोखरीको सामीप्य नपाएको अहिलेको पुस्ताका लागि नदी धर्मसँग परिचित हुने अवसर हो यो ।
छठको सामाजिक आयामतर्फ नजर लगाउँदा, भोजपुरी क्षेत्रहरूमा छठ पूजाका लागि स्थायी पिण्ड बनाएर राख्ने चलन छ, जुन नदी र पोखरीको घाट किनारमा हुन्छ । भोजपुरी क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको यो चलन मिथिला क्षेत्रमा भने प्राय: छैन । इँटा वा ढुंगाले बनाइने त्यस्ता बनाइएका पिण्डको लोकइतिहासबारे अपेक्षित जानकारी नपाइए पनि भोजपुरी क्षेत्रमा तिनको संख्या वर्षेनि बढ्दो छ । पछिल्ला दशकमा संयुक्त परिवार विघटित हुँदै गएकाले एउटै परिवारमा अब कैयौं छठी माई भइसकेका छन्, जसका लागि अलग–अलग पिण्ड बनाइन्छन् । परिवार र समुदायबीच एकभन्दा बढी भर्‍याङवाला पिण्ड बनाउने होड चल्ने गर्छ । मानौं एक–अर्काभन्दा श्रेष्ठ र शीर्ष देखिने अघोषित प्रतियोगिता हो छठ । कतिपय ठाउँमा त छठी मैयाको अस्थायी प्रतिमा नै बनाइएको पाइन्छ । छठलाई पहिचानको राजनीतिसँग पनि जोड्ने गरिएको छ । केही समययता शैक्षिक प्रतिष्ठान र सामाजिक संस्थाहरूले यस्तो कार्यलाई प्रश्रय दिएका छन् । तर यसले केही प्रश्न पनि खडा गरेको छ— छठ पर्व अनुष्ठान हो कि अभिनय ? आस्था हो कि आडम्बर ? छठ पर्वलाई अत्यन्त आस्था र निष्ठासाथ मनाउने चलन छ । यसमा कुनै पुरोहित वा कर्मकाण्ड हुँदैन । कृषि र प्रकृतिसँग जोडिएको यो पर्वमा बजारले प्रवेश पाएलगत्तै आडम्बरले ठाउँ लिन थालेको छ । त्यसैले पहिचान प्रदर्शनका लागि छठ पर्वको कलात्मक मञ्चनलाई कतिपयले औचित्यपूर्ण ठानेका छन् भने, कतिपयले यसबाट मौलिकता मासिने खतरा देखेका छन् । पूजा समितिहरूले अतिथि निम्त्याउने र तिनबाट अर्घ्य दिन लाउने नयाँ चलन चलाएका छन्, जसमा उनीहरू यस पर्वको स्वीकार्यता बढेको र राजकीय मान पाएको अनुभूति गर्छन् ।
छठ समावेशी हुँदै गयो, पहाड उक्लियो भन्ने जस्ता सकारात्मक सन्देश फैलिँदै जानुले यो लोकपर्वको गुरुत्वलाई बढाए पनि उपयोगितावादको अन्धदौडका कारण छठमा अभिव्यक्त हुने प्रकृतिप्रतिको कृतज्ञता बिर्सिइँदै गएको छ । यही कारण हो, छठ तयारीको क्रममा जलाशयहरूको सरसफाइ र मर्मत खुलेर गरिए पनि, सम्पन्न भएपछि पूजा सामग्रीका अवशेष त्यत्तिकै छाडिन्छन्, जसले फेरि प्रदूषण बढाउँछ । अर्कातिर, पारम्परिक जलस्रोतहरू विघटित हुँदै गएका छन् । पोखरी र इनार मासिँंदै गएका छन्, अतिक्रमित भएका छन् । नदीसँग समाजको सम्बन्ध टुट्दै गएको छ । तराईमा पानी एउटा ठूलो चिन्ता, गम्भीर मुद्दा र संकटको सवाल बन्दै गएको छ ।
नदी वा जलाशयलाई हाम्रो समाजले प्रकृतिको एउटा जीवित सत्ताका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ । त्यसैले समाजले कुनैलाई माई भन्यो त कुनैलाई दिदी वा बहिनी । यसको अर्थ थियो— पानीको महत्त्व बुझ्नु, पवित्रताप्रति हेक्का राख्नु र स्रोतहरूको संरक्षण गर्नु । तर छठ पर्वले विस्तार पाउँदै गए पनि यसमा अन्तर्निहित लोकसन्देश भने विस्मृत हुँदै गएको छ । पानीसँग अटुट नाता जोडिएको पर्व मनाउने समाजले पानीको पुर्ख्यौली ज्ञान बिर्संदै गएको छ ।
भौगोलिक विविधता, पानीको उपलब्धता र सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तरहरूका कारण विभिन्न ठाउँका मानिसको पानी प्रयोगको परम्परा बेग्लाबग्लै रूपमा भए पनि बाँचिरहेको हुन्छ । यो कुनै शासक वा संगठित संस्थाको प्रयत्नले भएको हुँदैन । तर परिवर्तित समयमा पानीमाथिको स्वामित्व, प्रयोग र प्रविधिको सान्दर्भिकता फेरिँदै गएको छ । प्रत्येक समाजमा आ–आफ्नै प्रकारका सूक्ष्मता र विशेषताहरू हुने भएकाले फैलिंदो छठले पनि आफ्नो पारम्परिक थलोका मूल विशेषताहरूलाई अन्यत्रका परम्परासँग जोड्दै गयो भने यो जीवन्त रहिरहन्छ । पानीको इज्जत गर्नु, मितव्ययी तरिकाले प्रयोग गर्न सिक्नु भनेकै छठको महत्त्व बुझ्नु हो ।
बजारको दुनियाँ हो यो । बजारले हामीलाई पानीको मूल्य बताउँछ । अनि हामी बुझ्छौं, बोतलमा बिक्रीका लागि राखिएको पानी कति महँगो छ । पानी सार्वजनिक सम्पत्ति भए पनि निजीकरण हुँदै गएको छ । पानीको आपूर्तिका लागि समाधानका रूपमा रोजिएको निजीकरण आफैमा संकट भएर खडा हुँदै छ । प्रकृतिको वरदानका रूपमा सहज प्राप्त पानीलाई हामी जसरी निस्फिक्री चलाइराखेका हुन्छौं, त्यही पानी किनेर ल्याउँदा हाम्रो प्रयोगको सीमितता हुन जान्छ । स्विमिङ पुललाई जति ध्यान नदिएकाले पोखरी र इनारहरू मासिँदै गए । नदीनालालाई हामीले साँघुरा र प्रदूषणयुक्त बनायौं ।
तराईमा आसन्न पानी संकट वर्षौंका गलत सरकारी नीतिहरूको नतिजा हो । बहुतहका सरकारहरू नदी, पोखरी र इनारको अस्तित्व जोगाउनभन्दा पनि मास्नमा बढी केन्द्रित देखिएका छन् । नदीदोहन गरी आयआर्जन गर्दै छन् भने पोखरी र इनारहरू फगत घडेरीका जग्गा । राज्यका लागि पानीको अर्थ सिंचाइ र नहर, निकास र बाँध, जलाशय र जलविद्युत्, अन्तरप्रादेशिक नदीहरूको स्रोतमाथिको व्यवस्थापन र खानेपानी आपूर्ति मात्रै बनेको छ । भूजल र त्यससम्बद्ध समस्याप्रति चासो देखिँंदैन । पारम्परिक जलस्रोतहरूको रक्षाका मौलिक उपायहरूप्रति पनि गम्भीरता पाइँदैन । समाजको पानीमाथिको अधिकार वा साझेदारीसम्बन्धी विमर्श कतै सुनिंँदैन । भुइँतहमा पानीको प्रभुत्वलाई लिएर जुन द्वन्द्वहरू खडा हुँदै छन्, तीप्रति बहुतहका सरकारले आँखा चिम्लेका छन् ।
पानीका ससाना स्रोतको व्यवस्थापनका परम्परागत र उपयुक्त प्रविधिहरूबारे भुइँतहमै विचार साझेदारीको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । पानीमाथिको पहुँच र प्रभुत्व साँघुरिँदै गर्दा स्थानीय समुदायहरूमा तिनको जीवन र मूल्य–मान्यतामा पर्ने असरको कथा छठ पर्वको बेला स्पष्ट हुन्छ । कुनै बेला इनारको पानीले प्रसादका परिकारहरू बनाइन्थे, अब ती गाउँ–टोलमा इनारै छैन, त्यहाँ चापाकल वा धाराको पानी प्रयोग गरिन्छ । अत्यन्त प्रदूषित पोखरी वा नदी किनारमा भव्य पण्डाल बनाइ पूजा गर्न थालिएको छ । पानीका स्रोतहरू प्रदूषित गर्ने जुन जघन्य अपराधमा समाज स्वयंको हिस्सेदारी छ, त्यसको प्रायश्चित्त आडम्बरयुक्त पूजनले सम्भव हुँदैन । लोकपर्व छठको एउटै सन्देश हो— पानी पूजनीय छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७६ ०८:४२
डा. शेखर कोइराला
नक्सापछि नेपाल–भारत सम्बन्ध
चिनियाँ गुन्द्रुकमा अलमलिएको उद्यमशीलता
रुकुम वियोगान्त : अमानुषिक प्रवृत्तिको उत्कर्ष
अपडेटः बुधबार, १४ जेठ, २०७७ । १६ : ३० बजे
ढुंगामा कुँदिएका तथ्यहरू
केशव दाहाल जेष्ठ १४, २०७७
यस लेखमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ ले नेपाली जनतालाई उपहार दिएका केही तथ्यबारे चर्चा गरिएको छ, जुन हाम्रा लागि ओली सरकार र त्यसको क्षमता हेर्ने आँखीझ्यालहरू...
डा. शेखर कोइराला जेष्ठ १४, २०७७
कोभिड–१९ सबै राष्ट्रका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेकै छ । यातायात, व्यापार–व्यवसाय, उद्योगधन्दा सब डाँवाडोल भएका छन् । केही उद्योग चालु रहे पनि तिनको खर्च अनुपात ह्वात्तै बढेको...
टीका ढकाल जेष्ठ १४, २०७७
विगत पाँच वर्षमा नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ ‘उचाइ’ मा पुगेको दाबी दुवै देशमा धेरै पटक गरियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले एकअर्का देशको भ्रमण गरिसकेपछि सम्बन्धमा देखिएका दरार...
रामेश्वरी पन्त जेष्ठ १४, २०७७
एउटा अनलाइनमा छापिएको किसान–व्यथासम्बन्धी लेखको शीर्षक थियो, ‘मानिसले तरकारी पाएनन्, तरकारीले खाने मानिस पाएन ।’ अहिलेको तीतो यथार्थ हो यो । काठमाडौं उपत्यकाकै मनोहरा खोलाकिनारको फाँटमा लहलह...
सम्पादकीय जेष्ठ १४, २०७७
रुकुमको चौरजहारीमा शनिबार राति जे भयो, त्यो एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपाली समाजमा कुन स्तरको जातीय उत्पीडन र क्रूर प्रवृत्ति जीवितै छ भन्ने दृष्टान्त हो । कथित...